Semalt နှင့်အတူ Website SEO အရောင်းမြှင့်တင်ရေး
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ World Web ဟာသတင်းအချက်အလက်ရှာဖို့အဆင်ပြေတဲ့နေရာပဲ။ ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းပြောင်းလဲသွားပြီ။ ယနေ့ကွန်ယက်သည်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေးအတွက်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ စက္ကူထုတ်ဝေမှုများ၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံများနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်များပင်သူတို့၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သတင်းစာဝယ်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ရုံတွေကိုနားထောင်နေတုန်းပဲ။ ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်ငွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော်လည်းအွန်လိုင်းအဖြစ်မှန်အတွက်အချိန်ရောက်လာပြီဟုလူတိုင်းနားလည်ကြသည်။ ထိုတွင်လူတို့သည်ငွေရှာ။ အောင်မြင်သောစီးပွားရေးတစ်ခုကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည်။
ကမ္ဘာ့အမြင်အမြင်တွင်အပြောင်းအလဲများသည်ကျွန်ုပ်တို့မျက်လုံးများရှေ့တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ကမ္ဘာ့ ၀ က်ဘ်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုသောရေကြောင်းပြသူများပိုမိုများပြားလာသည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လျက်ရှိသည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်ကွန်ယက်ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည် - ဗွီဒီယိုကြည့်ခြင်း၊ သတင်းဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ် ၀ တ်စုံအသစ်ဝယ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းများကိုအွန်လိုင်းမှငွေပေးချေခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ သာမန်လူတစ် ဦး သည်ယခုအခါအွန်လိုင်းစတိုးသို့သွားပြီးကုန်ပစ္စည်းပြခန်းကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးသူတို့၏မေးခွန်းများကိုမေးနိုင်သည်။ တုံ့ပြန်ချက်သည်အရည်အသွေးရှိသောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်မည်သူမဆိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ အင်တာနက်သည်သင်စျေး ၀ ယ်နိုင်သည့်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်အားကောင်းသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ အွန်လိုင်းစတိုးများ၏စီးပွါးရေးအရှိန်အဟုန်သည် ၀ က်ဘ်သုံးကိရိယာများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုသေချာပေါက်အတည်ပြုသည်။ သူတို့ကတကယ်တော့ site ပိုင်ရှင်တွေသိသိသာသာဝင်ငွေတိုးမြှင့်ကူညီပေးနိုင်သည်။
၀ က်ဘ်မြှင့်တင်ရေးသည်အမှန်တကယ်တွင်မည်သူမဆိုအလားအလာရှိသောစားသုံးသူများသည် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို virtual space တွင်ရှာဖွေနေသည်။ သင်၏ visitors ည့်သည်အများစုမှာချမ်းသာကြွယ်ဝသူများဖြစ်သည်။ အလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူအမြောက်အများသည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေကြသည်၊ သို့သော် ... ပြိုင်ဘက်များ၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်? သူတို့သည်သင့်ရှေ့မှောက်တွင်သူတို့၏အင်တာနက်အရင်းအမြစ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်ဝက်ဘ်ရှာဖွေသူများစာရင်းထဲတွင်သူတို့ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ တ ဦး တည်းအထဲကမောင်းနှင့်ပင်ပြိုင်ဘက်ကိုအစားထိုးနိုင်ပါသလား? ဟုတ်ပါတယ်၊ ဝက်ဘ်မြှင့်တင်ရေးကို Semalt ပညာရှင်များ အားအပ်နှင်းပါ ။
စတိုးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သူတိုင်းကမြို့၏ဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်နေရာတွင်ရောင်းဝယ်ခြင်းဆိုသည်ကိုသိကြသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပထမဆုံးအနေဖြင့်လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းမပြုမီရရှိမည် သူတို့သည်ဆိုင်လိပ်စာကိုကြည့်။ မသိစိတ်အဆင့်တွင်၎င်း၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုအကဲဖြတ်ကြသည်။ ခရီးသွား and ည့်သည်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပြားလာသောမြို့လယ်ခေါင်တွင်တည်ရှိသောကုမ္ပဏီသည်သာယာဝပြောမှုအတွက်ခြုံငုံမိသည်။ ချမ်းသာသောဖောက်သည်များသည်သင့်ထံအလျင်အမြန်လာရောက်လိမ့်မည်။ ဤနည်းဥပဒေသည်ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်သာအကျုံးဝင်သည်။ ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာများ၊ အားကစားရုံများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများသည်စူပါမားကက်များသို့မဟုတ်ဖက်ရှင်ဆိုင်များကဲ့သို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဥပဒေများကိုလိုက်နာသည်။ World-Wide-Web တွင်လူများသည်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသောအတွေးအခေါ်များကိုသတိရှိရှိသို့မဟုတ်မသိစိတ်ဖြင့်မှီခိုအားထားနေခြင်းကိုသင်အံ့အားသင့်သလား။ အကယ်၍ သင်သည်ထိပ်ဆုံး ၁၀ ဦး တွင်ပါဝင်လျှင်သင်၏အရင်းအမြစ်ကိုလေးစားထိုက်ပြီးဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိဟုသတ်မှတ်သည်။
အော့ဖ်လိုင်းစတိုးဆိုင်၌ရှိသကဲ့သို့, virtual အာကာသအတွင်းကောင်းသောနေရာ, ဝယ်လက်ဆွဲဆောင်။ ထိပ်ဆုံးရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်သင်ပါ ၀ င်ပါကအလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူ ၉၅% သည်သင့်ကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ ကိန်းဂဏန်းများအရရှာဖွေသူများ၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ရှာဖွေမှု၏စတုတ္ထမြောက်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သွားလိုကြသည်။ အော့ဖ်လိုင်းစတိုးနှင့်မတူဘဲဂုဏ်သိက္ခာရှိသောရာထူးများသို့ရောက်ရှိရန်အတွက်သင့်တော်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာအရဘဏ္financialာရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများစွာမလိုအပ်ပါ။ ဤတွင်သင်မြူနီစီပယ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ pliable အရာရှိတစ် ဦး မဟုတ်ဘဲအတွေ့အကြုံရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာတွေ့မှရှိသည်။ သူတို့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းပေးရမယ်၊ ဒါပေမယ့်မြို့တော်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့inရိယာမှာငှားရမ်းခထက်အများကြီးနည်းတယ်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာမြို့တော်ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာရှိတဲ့လက်လီအရောင်းဆိုင်တစ်ခုက Google SERP ရဲ့ထိပ်တန်းရာထူးတွေလိုပဲနိုင်ငံအသီးသီးမှယုံကြည်သူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
အွန်လိုင်းစတိုးကိုယေဘုယျအကဲဖြတ်ရန်နှင့်အဓိကအားဖြင့်မည်သည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသဘောပေါက်ရန်အတွက် SEO အထူးကုသည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဆန်းစစ်သင့်သည်။ ဤအဆင့်တွင်စီးပွားရေးမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာနှင့်ပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲထားသည်။ အောင်မြင်သော Semalt စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး တစ်ခုဖြစ်သည့် Insignis ၊ ရိုမေးနီးယားမှအိမ်အလှဆင်ပစ္စည်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုကြည့်ကြစို့။ အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်ဘက်သုံးပစ္စည်းများ (ပရိဘောဂ၊ မီးခွက်၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဖယောင်းတိုင်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ) ကိုရောင်းချသည်။ ကုမ္ပဏီသည်မြို့တော်နှင့်တိုင်းပြည်၏မြို့ကြီးများသို့အရည်အသွေးမြင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုလျင်မြန်စွာဖြန့်ဝေပေးသည်။
ကြိမ်နှုန်းမြင့်၊ ပျှမ်းမျှနှင့်အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းမေးမြန်းမှုများအတွက် www ဆိုင်၏ယေဘုယျမြင်သာမှုကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Semalt ကျွမ်းကျင်သူသည်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်စျေးကွက်ခေါင်းဆောင်များ၏အားသာချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လယ်ကွင်းရှိထိပ်တန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏မူဘောင်များနှင့် ၄ င်းတို့၏ချိတ်ဆက်မှုပရိုဖိုင်းများနှင့် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုကောင်းမွန်စွာရှာဖွေနိုင်ရေးအတွက်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ထားသည့်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကန ဦး အဆင့်တွင် Semalt pro သည် site ကိုယေဘုယျတိုးတက်မှုများလိုအပ်မလိုကိုရှာဖွေသည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် site တည်ဆောက်ပုံကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်အကြံပေးနိုင်သည် - ဒီဇိုင်း၊ သွားလာမှု၊ သတင်းအချက်အလက်ပိတ်ဆို့မှုများ၏တည်နေရာနှင့်အကြောင်းအရာ၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာအသစ်များဖန်တီးခြင်း။
SEO စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး ၏ဤအဆင့်တွင်၊ CMS ကိုပြုပြင်မလား၊ ဆိုက်ကိုမိုဘိုင်းပစ္စည်းများနှင့်ပြုပြင်ရန်၊ https သို့ https ပြန်ရေးရန်စသည်စသည်ဖြင့်စဉ်းစားသင့်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ဘတ်ဂျက်ပြုလုပ်နေစဉ်ယေဘူယျတိုးတက်မှုလိုအပ်ချက်ကို ၀ ယ်သူနှင့်ကြိုတင်ဆွေးနွေးထားသည်။
ရှာရန် Query Core
ဤအဆင့်တွင် SEO pro တစ်ခုသည် semantic core ၏ကြိမ်နှုန်းကိုစုစည်းသည်၊ ဆုံးဖြတ်သည်။ www-store ပုံစံနှင့်အညီ, semantic core တွင်ရာဂဏန်းမှရာထောင်ချီသော search query များပါဝင်နိုင်သည်။ အဓိကဖွဲ့စည်းခြင်းသည်လပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုအခြားအလုပ်များနှင့်အပြိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Insignis ၏ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်မစာမျက်နှာ၊ ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားနှင့်ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ တွင်အဆင့်ရှိအမြီးရှည်များ၏ဘုံသော့ချက်စာလုံးများကိုမြှင့်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မြှင့်တင်မှုစတင်ပြီးနောက်နှစ်လတွင်နောက်ထပ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးထပ်ထည့်ခဲ့သည်။ ။
မည်သည့် site မဆိုပင်မစာမျက်နှာသည်ပင်မပင်ဖြစ်သည်၊ အခန်းများနှင့်အခန်းများသည်အကိုင်းအခက်များနှင့်အရွက်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ဘယ်လောက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တည်ရှိမလဲဆိုဒ်၏ပုံစံနှင့်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာတွင်သစ်ပင်ပင်စည်များရှိပြီးလမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သည်။ Insignis သည်အွန်လိုင်းစတိုးအားလုံးကဲ့သို့အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအဆင့်များစွာရှိသောမူဘောင်ရှိသည်။ ရှာဖွေရေးမေးမြန်းမှုအုပ်စုတိုင်းအတွက်၊ သင်ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာကိုတည်ဆောက်ပြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်။ ကြိမ်နှုန်းနည်းသောစုံစမ်းမှုများအတွက်ထုတ်ကုန်၏ပင်မစာမျက်နှာကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်သတိပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်သောစုံစမ်းမှုများအတွက်အမျိုးအစားမူလစာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ထားသည်။
၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအသစ်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုသည်ပြိုင်ဘက်များ၏ရှာဖွေမှုဖော်ပြချက်အပြင်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအကွာအဝေးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်လာသည်။ Insignis၊ စျေးကွက်နှင့်တွဲဖက်ရုံးများရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများရှိဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာများရှိသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကြီးများအတွက်၊ ဆင်းသက်ရန်စာမျက်နှာများကိုမြို့ပြအရေအတွက်များပြားစေသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၏အကြောင်းအရာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရမည်။ ကြီးမားသောစီမံကိန်းများတွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသစ်များကို site မြှင့်တင်မှုစတင်ကတည်းကနှစ်နှစ်ပင်ပြုလုပ်သည်။ လိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိရန် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဗိသုကာကိုချဲ့ရန်အဓိကလုပ်ဆောင်မှုကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်ရမည်။
ပြည်တွင်း optimization ရည်မှန်းချက်များ
အထူးကုသည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းအုပ်စုအတွက်ဆင်းသက်ခြင်းနှင့်အမှားပြင်ဆင်ခြင်း၊ စာမျက်နှာများမိတ္တူပွားများကိုဖယ်ရှားခြင်း။ ဤသို့ပြုရန်အတွက် site ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ SEO စစ်ဆေးမှုကို အခြေခံ၍ အတွင်းပိုင်းတွင်ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ Insignis ၏ဖြစ်ရပ်တွင်အမှားများကိုတည့်မတ်ပေးပြီးနည်းပညာဆိုင်ရာစာရင်းစစ်ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်သောအဓိကပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။
သက်ဆိုင်ရာကြီးမားသောသော့ချက်စကားလုံးများကို အသုံးပြု၍ ပင်မစာမျက်နှာအတွက် meta tags များကိုထည့်သွင်းရန်၊
အမှားအယွင်း ၄၀၄ ခုကိုပြုပြင်ရန်နှင့် URLs အားလုံးမှန်ကန်မှုရှိစေရန်။
Local Business အမျိုးအစား၏စနစ်ကျသောအချက်အလက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ထုတ်ကုန်၏ပင်မစာမျက်နှာပေါ်ရှိ layout ကိုပြုပြင်ရန်၊
စဉ်ဆက်မပြတ်သော redirects သုံးပြီး URL များ၏ပုံတူကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်, canonical လိပ်စာများ, noindex အောက်ပါအတိုင်း;
လိုအပ်သော tags များကိုပိတ်ရန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောစာမျက်နှာများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများကိုရှာဖွေခြင်းတို့အား robots.txt ကိုချိန်ညှိရန်။
XML site map တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရန်၊
သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စကားလုံးများကို သုံး၍ အဓိကနှင့်အမျိုးအစားစာမျက်နှာများအတွက်ထူးခြားသော SEO အကြောင်းအရာများကိုရေးသားရန်၊
အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့်ဓာတ်ပုံများသို့ပျောက်သွားသည့် alt tag များထည့်သွင်းရန်။
၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုဆင်းသက်ရန်သာမကဖောက်သည်များနှင့်ဝဘ်ပင့်ကူတို့သည်အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာများသို့အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက်ပြည်တွင်းဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဤအရာကိုမပြုလုပ်ပါက၎င်းတို့သည်ဝဘ်ရှာဖွေသူများ၏အညွှန်းတွင်ထွက်မလာပါ။ SEO အထူးကျွမ်းကျင်သူသည် menu အမျိုးအစားများ၏ချိတ်ဆက်မှုကိုတီထွင်ထားသော scripts ၏အကူအညီဖြင့်တည်ဆောက်သည်။ ၎င်းတို့သည်ယခင်ကစုဆောင်းထားသည့်မေးမြန်းချက်များကိုပေါင်းထည့်ပြီးယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းသောဝက်ဘ်စာမျက်နှာများမှမြင့်မားသောအသိုက်ရှိစာမျက်နှာများသို့ static weight ကိုလွှဲပြောင်းပေးသည်။
Optimizer သည်ကိုယ်တိုင် meta tags များနှင့် H1 ခေါင်းစဉ်များကိုလိုအပ်သည့်နေရာများရှိရှာဖွေရန်တောင်းဆိုမှုများ၏“ ရှည်လျားသောအမြီး” အပေါ် အခြေခံ၍ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးသည်။ ထို့အပြင် www စတိုးတွင်တိုးမြှင့်ထားသောစာမျက်နှာများအတွက်မူယခင်ကစုဆောင်းထားသောသော့ချက်မေးမြန်းချက်များပါ ၀ င်သည့်စာသားများကိုဖွဲ့စည်းသည်၊ စာမျက်နှာများသည်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းများမေးမြန်းခြင်းနှင့်အမြောက်အများမေးမြန်းခြင်းများဖော်ပြခြင်းဖြင့်စာသားများသည်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ Insignis ၏ဖြစ်ရပ်တွင်အဓိကသော့ချက်စကားလုံးများနှင့်အမြီးရှည်များအားလုံးသည်ထိပ်ဆုံး ၁၀၀ သို့အမြင့်ဆုံးအဆင့်သို့ရောက်ရှိနိုင်ခဲ့သည်။ အဓိကဝက်ဘ်စာမျက်နှာနှင့် ဦး စားပေးအမျိုးအစားများအပြင်နောက်စာမျက်နှာများသည်အများဆုံးဝေစုရရှိခဲ့သည် အသွားအလာ - မီးခွက် / မီးအိမ် / အလှဆင်ပစ္စည်းများ / မီးခွက်။
ဤသည်မှာ Google ရှာဖွေစက်ရုပ်များသည်အချိန်အတန်ကြာတွားသွားနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးစာမျက်နှာအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာအတွေ့အကြုံရှိပညာရှင်များသာတွားဘတ်ဂျက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ ကျွမ်းကျင်သူသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်အဆင်ပြေစေရန်ဖန်တီးထားသော“ အမှိုက်ပုံးစာမျက်နှာများ” ကိုပိတ်ပစ်သည်။ ဝက်ဘ်ရှာဖွေသူများအား "အမှိုက်စာမျက်နှာများ" သို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုတားမြစ်ပြီး၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်မှုများကိုပိတ်နိုင်သည်။
web crawler algorithms သည်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသလား။ သူတို့လုပ်တယ် ထို့ကြောင့် SEO-Pros သည်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။
client ကိုရှာဖွေရေး display ကိုမှပြန်လာမဟုတ်;
မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် www ဆိုင်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းသည်မိုဘိုင်းရလဒ်များအတွက်ဆိုဒ်၏မြင်သာမှုကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လက်ကိုင်ဖုန်းများမှအဆင့်မြင့်ပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်သောလမ်းကြောင်းသည်တုန်ခါမှုနှုန်းကိုကျဆင်းစေသည်။ "About Us" စာမျက်နှာ၏သင့်လျော်သောဒီဇိုင်းသည် visitors ည့်သည်များနှင့်ဝက်ဘ်ရှာဖွေသူများ၏ယုံကြည်မှုကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။
မည်သည့်အရင်းအမြစ်များအတွက်၎င်းသည်အသုံးဝင်သနည်း။ ၎င်းသည်အပြိုင်အဆိုင်များသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်သောထိုဆိုဒ်များအတွက်အသုံးဝင်သည်။ ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းပါးသောအချို့နေရာများတွင် ၀ င်နေသောလင့်ခ်များကိုမဖန်တီးဘဲသင်လုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အများစုအတွက်မူပြင်ပမှအကောင်းမြင်မှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။ အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအကြောင်းအရာဆိုင်ရာဆိုဒ်များကသင့်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြလေ၊ သင်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည်ဝဘ်တွားတတ်သောသူများ၏အမြင်တွင်ဖြစ်လာသည်။ link profile တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးအလှူရှင်များကိုရွေးချယ်ရမည့်အချက်များစွာရှိသည်။
ဖောက်သည်များထံမှ visitors ည့်သည်များထံမှကူးပြောင်းခြင်းတိုးလာသည်
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မြှင့်တင်ရေး၏ဤအဆင့်ဒီဇိုင်း, အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်, အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုပင်အသိပညာလိုအပ်သည်။ ဤနေရာတွင် SEO အထူးကုသည်အောက်ပါလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်။
မန်နေဂျာ -to- မန်နေဂျာဆက်သွယ်ရေး၏ algorithms ကထပ်ပြောသည်;
ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ element များ၏အရောင်များကိုပြောင်းလဲ;
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသောကိုယ်ပိုင်သတင်းလွှာများကို configure လုပ်သည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည် site ပြောင်းလဲမှုကိုတိုးမြှင့်စေသောတိုးတက်မှုများထဲမှတစ်ရာမျှသာရှိသည်။ Insignis ၏အောင်မြင်မှုသည်ဤကုမ္ပဏီ၏အဓိကသော့ချက်စကားလုံးများထဲမှတစ်ခုသည် TOP-10 ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ နောက်ထပ်သော့ချက်စကားလုံး (ဦး စားပေးအမျိုးအစားအတွက်) သည် TOP-3 သို့ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းကုန်သွယ်မှု၏အောင်မြင်မှုသည်တွေ့ရခဲသောအယူအဆမဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုအချက်အလက်များဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဒီရိုမေးနီးယားကုမ္ပဏီအတွက် ၆ လတာ ၀ န်ယူမှု SEO ရဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါကိန်းဂဏန်းများတွင်ထင်ဟပ်ပြသခဲ့သည်။ TOP-1 တွင်အဓိကစာလုံး ၂၃၂ လုံး၊ TOP-TEN တွင် ၁၁၃၆ စကားလုံးများရှိသည်။ - အသီးသီး4နှင့် 55) ။ ပထမလတွင်အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေခြင်းဖြင့်ထိုထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေသူ ဦး ရေမှာ ၁၀၀၀ ကျော်မြင့်တက်လာသည်။ ၀ င်ငွေတိုးလာခြင်းနှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းတို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ သင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ရှိစာမျက်နှာများအားလုံးကိုလျင်မြန်စွာရည်ညွှန်းချင်ပါသလား။ Semalt သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံး SEO မြှင့်တင်ရေးနည်းဗျူဟာကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။